#NABShow 2017: ကြေငြာချက်ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် MSG ကွန်ယက်စီမံကိန်းကိုမျိုးဆက်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တာတွင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » #NABShow 2017: ကြေညာချက်ပြန်လည်စုစည်းမှု: Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထုတ်လုပ်မှုစင်တာတွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် MSG ကွန်ယက် Plan ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ!
အောက်တိုဘာလ 1, 2014: နယူး MSG ကွန်ယက်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို။
အဓိကကြေညာချက်မှာဒီရက်သတ္တပတ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် #NABShow 2017. ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် MSG ကွန်ယက် ခုန်ဖို့သူတို့ရဲ့တည်ဆဲကစားထွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုစတင်ပါ။ အဆိုပါ Nexio + amp မီဒီယာအများအပြားနှင့် Versio IOX သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်စားသုံးမိ, သိမ်းဆည်းခြင်း, နှင့် play-ထွက်စစ်ဆင်ရေး၏နယ်ပယ်များတွင် MSG ကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ကိုကူညီပေါင်းအချို့ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းတည်းဖြတ်ရေးစစ်ဆင်ရေးများကိုပါလိမ့်မယ်။
"ကျနော်တို့အနာဂတ်နည်းပညာနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်စျေးကွက်လိုအပ်ချက်လိုက်လျောညီထွေဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအားကစားတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုယနေ့တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မလုံလောက်ပါ extensible ဖြစ်ရနျကြှနျုပျတို့၏ပလေးအောက်အဆောက်အအုံများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်" Belinda Binkley, VP အင်ဂျင်နီယာ MSG ကွန်ရက်ကပြောပါတယ်, အိမ်နယူးယောက်ဧရိယာထဲမှာအများအပြားအားကစားအသင်းများ၏ထုတ်လွှင့်အဖြစ်ဖြစ်ရပ်များရာပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်။ "ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အတိတ်ကာလတစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်ခဲ့ငါတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အားကစား-related programming ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် '' သှငျး ထား. အစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူ lockstep အတွက်ကြီးထွားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့မယ်လို့အဖြေတစ်ခုမကယ်မလွှတ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်မှုခဲ့ကြသည်သိရပါတယ်။ "
ထို့နောက်ပိုင်ရှင်ဝီလျံ Kissam ဗန်ဒါဘစ်လ်အတွက်အားဖြင့် "ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးနယ်ပယ်တွင်" ဟုအမည်ပေးထားသည့်ခံရ Madison Square Garden,
1879, များစွာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါနယူးယော့ Rangers, နယူးယော့ Knicks, နှင့်နယူးယော့ Liberty အဖြစ်, ကောလိပ်စိန့်ဂျွန်ရဲ့အနီရောင်မုန်တိုင်း (ယောက်ျားရဲ့ဘတ်စကက်ဘောအသင်း) MSG Networks ကဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကအစပန်ကာရဲ့ Buffalo ဖုံးကိုဓားရှည်, နယူးဂျာစီမာရ်နတ်ဟာနယူးယော့ကျွန်း၏အဘို့လွှမ်းခြုံသည်။ MSG ကွန်ယက်ကိုလည်းမူရင်း programming နဲ့ Archive programming ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲလွှမ်းခြုံ, အထက်တန်းကျောင်းအားကစားလွှမ်းခြုံ, အွန်လိုင်း programming ကိုဖြန့်ဝေလျက်, နံနက်အတွက် Boomer နှင့်ပုံးနဲ့တူရှိုးစကားပြောရန်!
အသစ်ကစစ်ဆင်ရေး၏ဗဟိုမှာဖွင့်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါလိမ့်မည် software များကို-based ပလက်ဖောင်း Nexio + ™AMP® စားသုံးမိခြင်းနှင့် play-ထုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်သောမီဒီယာဆာဗာကိုနည်းပညာ, ။ မျိုးစုံတာဝန်များကို streamlining ၏တိုးတက်မှု MSG ကွန်ရက်မှာ 80 ကျော်လိုင်းများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ချောမွေ့စွာကို Adobe Premiere Pro ကို (ရွေးချယ်မှု MSG ရဲ့ပြင်ဆင်ရန်ပလက်ဖောင်း) နဲ့ပေါင်းစပ်, အကြောင်းအရာ၏တည်းဖြတ်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
အသစ်ကစားထွက်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာရဲ့စဉျးစားကွညျ့ရပါလိမ့်မယ် Versio IOX ™သိုလှောင် အရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ network operator များမှတစ်ဦး SAN ၏အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူရယူပေမယ့်အများအားဖြင့်တစ်ဦး NAS ဖြေရှင်းချက်နှင့်မြင်စျေးနှုန်း၎င်း tag နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူရန်အဘို့အ 10-gigbit Ethernet link ကိုကျော်အပြည့်အဝ sharable နှင့်အရွယ်မှာသိုလှောင်ပေးသည်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့် Versio IOX စကေးထွက် NAS သိုလှောင် စွမ်းအားဖြင့် (ထို MSG ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်ဘို့) ဖြေရှင်းချက် EditShare EFS နဲရဲ့စဉျးစားကွညျ့နည်းပညာမိတ်ဖက်များကထောက်ပံ့ပေးခြင်း, စကေးထွက်ဖိုင်စနစ်နှင့်သိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုပလက်ဖောင်း EditShare။ အဆိုပါ Versio IOX စကေးထွက် NAS သိုလှောင်အော်ပရေတာလွယ်ကူပါတယ်-to-စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြေရှင်းနည်းများ, အစွမ်းထက်သိမ်းဆည်းခြင်း, high-bandwidth နှင့်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်မီဒီယာစားသုံးမိပါစစ်ဆင်ရေး၏ထောက်ခံမှုပေးလိမျ့မညျ!
"Madison Square Garden တစ်ဂုဏျနှင့်အထင်ကရအားကစားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ "ကြည့်ရှုသန်းပေါင်းများစွာမှအားကစားအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်အမှတ်ရစရာအခိုက်အချို့ကိုပေးအပ်အတွက် MSG ကွန်ယက်ကူညီ၎င်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် မာကု Senecal, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ VP ကပြောပါတယ်, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. "သစ်ပလေးအောက်စက်ရုံ MSG ကွန်ယက်တစ်ခုပင်မြင့်မားအဆင့်အထိရန်၎င်း၏ဂိမ်းဖွင့်ဖွနှင့်ကုမ္ပဏီချောမွေ့စွာအနာဂါတ်ကာလတွင်နယူးယောက်မြို့ဧရိယာအားကစားပရိသတ်တွေ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဝတ်ပြုဖို့သူ့ရဲ့ network ကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။ "
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.imaginecommunications.com.
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ေူပာင်းလဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုကနေတဆင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအာဏာ။ ထုတ်လွှင့်, ကွန်ယက်များ, ဗီဒီယိုကဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကမ္ဘာတဝှမ်းကသူတို့မစ်ရှင်-အရေးပါသောလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ optimized အနာဂတ်-သက်သေပြ, multiscreen ဗီဒီယိုနှင့်ဝင်ငွေပေးရန်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အားကိုး။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုအားလိုင်းများ၏တစ်ဝက်နီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြတ်သန်း, ငါတို့ software ကိုဖြေရှင်းချက်အနီးကပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာဝင်ငွေတတိယဖို့ကားမောင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအားဖြင့်သာအများဆုံးအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် cloud-enabled, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်နေကြသည်။ အလည်အပတ် www.imaginecommunications.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ @imagine_comms.
EditShare ကွန်ရက်ကိုမျှဝေရန်သိုလှောင်မှုနဲ့ tapeless အတွက်နည်းပညာကိုရှေ့ဆောင်အဆိုပါများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် Post-ထုတ်လုပ်မှု, တီဗီ, နှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း။ EditShare'' s ကိုသဲထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသုံးပလက်ဖောင်းနေရာ (Windows / OS X ကို / Linux ကို) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာ - သူတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, high-performance ကိုဗဟိုက Shared သိမ်းဆည်းခြင်း, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား software ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Lightworks ပါဝင်သည်။ အလည်အပတ် www.editshare.com နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2017 ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် NAB ပြရန် LIVE ။ 2016 ခုနှစ်, NAB ပြရန် တိုက်ရိုက် 1.3 သန်းအွန်လိုင်းကြည့်ရှုကျော်နှင့် 2017 စဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိ NAB ပြရန်ကျနော်တို့ 1.5 သန်းကြည့်ရှုကျော်လွန်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး 2017-04-28
ယခင်: Ericsson က UDN တရုတ်စားသုံးသူတွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ချဲ့ထွင်
နောက်တစ်ခု: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level)